နည်းပညာ | ဒီပကျော်(နည်းပညာ) | Page 5
May 4, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
ဖေ့စ်ဘွတ်ဆိုတာ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း၊ မိသားစုနဲ့ မိမိသိတဲ့ တခြားသူများနဲ့အတူ ဘဝအကြောင်း အပြန်အလှန်ဝေမျှ အဆက်အသွယ်ပြုရတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေသစ်များနဲ့ သိကျွမ်းနိုင်တယ်၊ စီးပွားရေးကြော်ငြာတွေ ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး တခြားပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ အများမြင်အောင် share သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းပေါ် မဖော်ပြသင့်တဲ့ အချက်တချို့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချက်အလက်တွေဟာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အခိုးခံရမှုအန္တရာယ် ကျရောက်ကာ ဟက်ကာတွေကြောင့် အကောင့် ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အလုပ်ပြုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တခြားကြီးမားတဲ့ ပြသနာရပ်တွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ အများမြင်အောင် မဖော်ပြသင့်တဲ့ အရေးကြီးအချက်အလက် (၅) ချက် ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့
၅။ မွေးနေ့ရက်စွဲ တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပေးပို့ထားတဲ့ message ကို တစ်ဖက်လူ မဖတ်ခင် ပြန်ရုတ်သိမ်းနိုင်ပြီ
ကိုယ့်ပို့မိလိုက်တဲ့ message တွေကို တစ်ဖက်လူ မဖတ်ခင် ပြန်ဖျက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ App အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Privates က သုံးစွဲသူတွေကို message တွေ ပြန်ခေါ်လို့ ရစေပါတယ်။
အဲ့ဒီ message ပြန်ရုတ်သိမ်းတဲ့ function ဟာ လက်ခံရရှိသူ ဖွင့်မဖတ်မချင်း ရနိုင်ပါတယ်။ App ဟာ Dr Isaac Datikashvili ဆိုသူရဲ့ ပင်ကိုတီထွင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို Private သို့မဟုတ် Keep Your Messaging Private လို့ ခေါ်ပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ Privates ဟာ Apple ရဲ့ iOS မှာသာ ရနိုင်ပေမယ့် Windows နဲ့ Android ဗားရှင်းတွေအတွက်လည်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေကြောင်း မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ယင်း app က သုံးစွဲသူတွေကို Mild၊ Wild နဲ့ Insane ဆိုတဲ့ လုံခြုံရေး အဆင့် (၃) ဆင့် ရွေးချယ်စေပြီး message ကို မဖတ်မချင်း ဖျက်ပေးပါတယ်။
လက်ခံရရှိသူ message ကြည့်မကြည့် သိစေတဲ့ ရွေးချယ်စရာ function တစ်ခုလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။
ကားမောင်းနေစဉ် Text messages အန္တရာယ်ကင်းစွာ စစ်ဆေးနည်း
ကားမောင်းနေစဉ် ဖုန်းနဲ့ စာဖတ်ခြင်း (သို့) စာရိုက်ခြင်းတို့က အလွန်အမင်း အန္တရာယ်များပါတယ်။ မျက်စိမှိတ်မောင်းနေရတာနဲ့ ထူးမခြားနားပါပဲ။
အမေရိကမှာ ကားမတော်တဆဖြစ်ပွားမှု ၄၀% က လက်ထဲ ဖုန်းကိုင်ထားတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၇% အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနဲ့ ၃၅% ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀ အတွင်း ကားမောင်းနေစဉ် စာတိုပေးပို့ကြကြောင်း ဝန်ခံကြပါတယ်။
ပိုမိုအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ စာတို ဝင်လာကြားတဲ့အခါ Siri (iPhone မှာ) သုံးပြီး စစ်ဆေးပါ။ Apple ရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် အကူအညီရယူဖို့ iPhone ရဲ့ Home button ကို ဖိထားပြီး “Read my messages” လို့ ပြောရပါမယ်။ ဖုန်းမှ အသံထွက်ဖတ်ပေးလို့ ဆက်မောင်းမလား ဒါမှမဟုတ် ကားရပ်ပြီး ပြန်စာဖို့လောက်တဲ့အထိ အရေးကြီးလားဆိုတာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ Android ဖုန်း ကိုင်ဆောင်သူဆိုပါက feature အတူတူလောက်ရှိတဲ့ app တစ်ခုခု ဒေါင်းလုဒ်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – ReaditToMe က အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
😃😀Telenor နဲ့ COCကိုအလကားဆော့ကြရအောင်. . .😄😄
April 22, 2016 dpakyaw	1 Comment
Telenor ကတရားဝင် လုပ်ထားထာပါ
အလကားပါ ဟုတ်ပါတယ် Telenor သုံးတဲ့ သားကြီးတွေ Sis တွေအတွက် တပတ်ဆော့ 100 MB COC Free Pack လေးပါ. Package လျှောက်ပြီးရင် ဘေလ်မရှိလဲဆော့လို့ရပါတယ်.
ဘေလ်ရှိလဲ COC အတွက်မဖြတ်ပါ
လိုတဲ့ App လေးကတော့ PlayStoreမှာရပါတယ် .
DataEye လို့ခေါ်ပါတယ် 3.1MB လေးပါ .
Download ဆွဲပြီးရင်တော့ ပုံထဲကအတိုင်း Telenor ကဒ်လေးနဲ့. တပတ်စာအလကားလျှောက်ပြီးဆော့ပေတော့ Fris တို့ . .
COC တပတ်ကို ၁၀၀ MB ပေးတော့အမုန်းဆော့ရတာပေါ့ဗျာ.
မြန်မြန်လုပ်ကြနော် M-9 ရက်နောက်ဆုံးထင်တယ်ဗျ
DataEye apkလေးကတခြားတော့ Data Firewall အနေနဲ့လဲသုံးလို့ရပါတယ် .
ကိုယ် Internet ပေးမသုံးစေချင်တဲ့ ဟာတွေပိတ်ထားနိုင်တာပေါ့ဗျာ.
PlayStore ကမရရင်တော့ MoboMark,Mobogenieတို့ကဒေါင်းနိုင်ပါတယ်
ဟန်နီ on 2016-04-07 15:04
နေပူလှုံခြင်း၊ ရေကူးခြင်းနဲ့ ဇိမ်ခံဖို့အတွက် နွေရာသီ အပူချိန်က အရင်က သင့်အတွက် သင့်တော်ကောင်းမွန်မှာပါ။ ခုလို အရမ်းပူပြင်းနေချိန်မှာတော့ သင့်အတွက်သာမက သင့်စမတ်ဖုန်းအတွက်ပါ မသင့်တော်တော့ပါဘူး။ ဖုန်းအပူလွန်တာ အသက်အန္တရာယ်များပြီး တချို့ကိစ္စတွေမှာ အပူလွန်ကဲရင် ဖုန်းကို လုံးဝ ပျက်စီးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ နေပူထဲ အပန်းဖြေသွားတဲ့အခါ မိမိဖုန်းကို ကြိုတင်ကာကွယ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖုန်းအပူချိန် မလွန်ဖို့ ဒီအချက်လေးတွေကိုလည်း သိထားဖို့ လိုပါတယ်။
(၁) ဖုန်းကို နေရောင်နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သော နေရာတွေမှာ မထားပါနဲ့။ အပူချိန်ပိုမိုလျော့နည်းတဲ့ တစ်ရိပ်တစ်ခုခုအောက် သို့မဟုတ် အိတ်တစ်ခုခုထဲ ထည့်သိမ်းထားပါ။
(၂) ဖုန်းအခွံကို ဖြုတ်မထားပါနဲ့။ အပူထိန်းပေးပြီး ဖုန်းကိုအေးနေအောင် ကာကွယ်ပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) မလိုအပ်တဲ့ background ပရိုဂရမ်တွေ ပိတ်ထားပါ။ processer ကို ပူနွေးမှုသာဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
(၄) မလိုအပ်သေးရင် ဖုန်းကို ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ အပူအချက်ချင်း သက်သာစေပါလိမ့်မယ်။
(၅) ဂိမ်း သို့မဟုတ် map တွေ အသုံးမပြုပါနဲ့။ ဂိမ်းကစားစဉ် သို့မဟုတ် map သုံးတဲ့အခါ ဖုန်းအပူမြင့်တက်တာ သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
(၆) ဖုန်းကို ကားထဲ ချန်မထားခဲ့ပါနဲ့။
(၇) ဖုန်းက အရမ်းပူနေလျှင် အားမသွင်းပါနဲ့။ ဘက်ထရီတွေဟာ အားသွင်းနေစဉ် အပူမြင့်တက်ကြတာဖြစ်တယ်။
မျက်မှောက်ခေတ်မှာ ကုမ္ပဏီတွေ အတော်များများက လစာကို ATM ကတ်တွေထဲ ထည့်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ငွေသားသယ်ဆောင် မသွားလိုသူတွေကလည်း ATM ကတ်တွေ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ATM ကတ်တွေ အသုံးပြုတာတွင် ကျယ်လာပေမယ့် ငွေထုတ်စက်တွေမှာ ငွေထုတ်တဲ့အခါ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ ငွေမထွက်တာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးကြုံလာတဲ့အခါ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကို ဒီတစ်ပတ်အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်ကတ်လုပ်ထားတဲ့ ဘဏ်ရဲ့ ငွေထုတ်စက်မှာထုတ်လို့ ထွက်မလာတာဆိုရင် ချက်ချင်းရနိုင်ပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်ကို ဖြတ်ဖို့မ လိုတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားဘဏ်ရဲ့ ငွေထုတ်စက်မှာ ထုတ်လို့ အခက်အခဲ ဖြစ်တာဆိုရင်တော့ အချိန် ၇ ရက်ခန့်ကြာနိုင်ပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ် ကနေဖြတ်ပြီး အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ရေခဲသေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန်
အတွင်း၌ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ ၀ိုင်ယာကြိုးများ တပ်ဆင်ထားသဖြင့် ရှော့ဖြစ်တတ်သည်။
၂။ မီးလောင်စေတတ်သော မှုတ်ဆေးဘူး၊ ဓါတ်ငွေ့ဘူးများကို ရေခဲသေတ္တာအနီးတွင် မသုံးပါနှင့်။ ရေခဲသေတ္တာမှ အပူကြောင့် မီးလောင်တတ်သည်။
၅။ ကာဘွန်နိတ်အအေးဗူး (ဥပမာ – ကိုကာကိုလာ၊ 100 Plus) စသည်တို့ကို အပေါ်ထပ် အအေးခန်းထဲ မထည့်ပါနှင့်။
၁၄။ အပူချိန်နိမ့်တွင် အလွယ်တကူ ပျက်စီးစေတတ်သော အသီးများ၊ ဥပမာ – ငှက်ပျောသီး၊ နာနတ်သီး၊ ဖရဲသီး၊ သခွားသီး၊ စသည်တို့ကို ရေခဲသေတ္တာအတွင်း ထည့်သွင်းမသိုလှောင်ပါနှင့်။
ရေခဲသေတ္တာကို မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းရမည်နည်း
အပန်းမကြီးလှသော ထိန်းသိမ်းမှု အနည်းငယ်မျှ လုပ်လျှင်ပင် ရေခဲသေတ္တာ၏ သက်တမ်းကို ပိုပြီးရှည်စေနိုင်သည်။ ထို့ပြင် ပျက်ချိန်မတိုင်မီ ပျက်မည့်အန္တရာယ်မှလည်း ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မည်။
၂။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်သည်ဆိုသော်လည်း ရေခဲသေတ္တာပေါ်သို့
ရေများလောင်းချခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ဓါတ်လိုက်တတ်သည်။
ရေခဲသေတ္တာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်မှာ ရေခဲသေတ္တာ၏
နောက်ဘက်၊ သို့မဟုတ် အောက်ဘက်တွင် ရှိတတ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အချို့ရေခဲသေတ္တာများတွင် ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်ကို အုပ်မထားသော်လည်း အချို့ ရေခဲသေတ္တာများတွင် ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်များကို အုပ်ထားတတ်သည်။ အုပ်ထားလျှင် ထိုအကာများကို ဖြုတ်ရန် လိုပါသည်။
၂။ ခရီးရက်ရှည်ထွက်တော့မည်ဆိုလျှင် –
(မီးခလုတ်ကောင်းမကောင်းကို တခြား လျှပ်စစ်ပစ္စည်း တစ်ခုခု (ဥပမာ – မီးပူ၊ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်) စတာတွေသုံးပြီး စစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မကောင်းရင် ခလုတ်လဲပါ။)
ရှော့ဖြစ်နေသလား စစ်ဆေးပြီး အရွယ်တူ ဖျူ့စ်ကို ပြန်ဝယ်ထည့်ပါ။ ဖျူ့စ်ကို မူလအရွယ်ထက် ပိုကြီးမထားပါနဲ့။ ရေခဲ သေတ္တာ ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာများအတွက် fuse ဟာ ၁၃ အမ်ပီယာ (13A) ဖျူ့စ် ဖြစ်ပါတယ်။)
(ရေခဲသေတ္တာနားမှာ မီးဖို၊ မီးပူစတာတွေရှိနေရင် ဝေးရာကို ရွှေ့ထားပါ။ ရေခဲသေတ္တာကို နေထိုးနေရင် နေမထိုးတဲ့နေရာကို ရွှေ့ပေးပါ။)
(ရေခဲသေတ္တာထဲမထည့်ခင် အစားအသောက်တွေကို အရင်အအေးခံပါ။ ပူနေတဲ့ အစားအသောက်တွေ ရေခဲသေတ္တာထဲမထည့်ပါနဲ့။)
(ရေခဲသေတ္တာထဲ ပစ္စည်းတွေထည့်တဲ့အခါ စနစ်တကျ ထည့်ဘို့လိုပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကျပ်သိပ်နေရင် လေကောင်း ကောင်းမလှည့်ပတ်နိုင်လို့ ကောင်းကောင်းအေးမှာ မဟုတ်ပါ။)
နံရံအကြားမှာ ပစ္စည်းတွေထည့်ထားရင် လေလှည့်ပတ်မှုမကောင်းလို့ အေးမှာမဟုတ်ပါ။ ရေခဲသေတ္တာနဲ့ နံရံအကြားမှာဘာပစ္စည်းမှ မရှိပါစေနဲ့။
အောက်ထပ်ရေခဲသေတ္တာခန်းထဲက အစားအသောက်တွေ အေးခဲနေလျှင်
(အရမ်းစွတ်စိုနေတဲ့ ဥပမာ – မျှစ်ချဉ်၊ ချဉ်ဖတ်၊ စိတ်ထားတဲ့ ဖရဲသီး စတာတွေဟာ ရေငွေ့ကိုထုတ်ပြီး တခြား အစားအသောက်တွေကို အေးခဲစေပါတယ်။ တကယ်လို့ ဖရဲသီးစိတ် ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်းမထည့်ပါနဲ့။ wrapping plastic ဆိုတဲ့ အစားအသောက်တွေကိုပတ်တဲ့ ပလတ်စတစ်အကြည်စ ပါးပါးကလေး ရှိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်ပြီးမှ ထည့်ပါ။)
(ပထမ – ရေခဲသေတ္တာထားတဲ့ ကြမ်းပြင်ဟာ ညီညာတဲ့ ကြမ်းပြင်ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး ရေခဲသေတ္တာရဲ့ ခြေထောက် လေးချောင်းစလုံး ကြမ်းပြင်နဲ့ထိနေရပါမယ်။ ခြေထောက်တစ်ဖက် လွတ်နေရင် တစ်ခုခုနဲ့ ခုပေးပါ။)
(အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် ကွန်ပရက်ဆာဘက်ကို သတ္တုပစ္စည်းတစ်ခုခုဝင်နေရင် အသံတွေမြည်နေပါမယ်။ အဲဒီအခါအဲဒီပစ္စည်းကို ရှာပြီးထုတ်ပစ်ပါ။)